Kenya oo martigelinaysa Shir ka dhan ah Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo martigelinaysa Shir ka dhan ah Farmaajo
Markii ay soo dhawaato doorashadda Soomaaliya, inta badan Musharaxiinta waxay dhaq-dhaqaaqyo siyaasadeed ka billaabaan Kenya, oo laga maamulo arrimaha dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Caasimadda Kenya ee Nairobi waxaa isagu tagey Musharaxiinta mucaaradka, oo ka hadlaya doorashadda iyo gudiyadda uu Farmaajo sameystay, oo ay sheegeen inaysan ku kalsooneyn dhex-dhexaadnimadooda.
Nairobi waxaa ku shiraya maalmahan Axmed Madoobe, Cabdi Gaas, Cabdikariin Guuleed, Cabdiracmaan Cabdishakuur iyo siyaasiyiin kale, oo isku aragti ah, kuwaasoo kawada hadlaya waxa ay ka yeeli doonaan, hadii Farmaajo uu diido inuu saxo hanaanka qaldan ee doorashadda.
Waxay isla garteen inaysan ka qeybgalin doorasho loo dhiibay dhalinyaro ciyaalka xaafadda, oo u badan kuwii Farmaajo baraha bulshada ka taageeri jiray iyo askar katirsan NISA, kuwaasoo la hubo inay codadka ugu shubi doonaan Madaxweynaha hadda talada haya.
Machadka Heritage ayaa Warbixin uu soo saarey ku baaqey in la baabi’iyo Guddiga doorashada ee uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, maadaama dhismihii loo maray wado sharci darro ah, sida ay Keydmedia Online hore u shaacisay.
Musharixiinta ayaa baajiyay kulan la filayay inay Muqdisho ku yeeshaan, kadib markii ay ka baqeen in loo dhigo shirqool weerar, maadaama la ogyahay in Caasimadda dhowr jeer lagu weeraray C/raxmaan Cabdishkuur isagoo loo diiday inuu kulamo siyaasadeed qabsado.
NISA oo ay ku jiraan xubno badan oo argagaxisadda la shaqeeya ayaa la rumeysan yahay inay Al-Shabaab u fududeysay weeraro badan oo Muqdisho ka dhacay, oo lagu dilay siyaasiyiin iyo shaqsiyaad maamulka Farmaajo kasoo horjeeday.
Siyaasiga C/raxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in Muqdisho aan lagu qaban doonin doorasho sharci darro ah, oo aan waafaqsanayn heshiiskii 17-kii September lagu gaarey Villa Soomaaliya, ee la xiriira hanaanka doorashadda.
Waqtiga doorashadda waxaa ka dhiman wax ka yar labo todobaad, mana muuqato wax diyaargarow ah, waxaana socda khilaaf iyo is-jiid-jiid keeni kara dib u dhac ku yimaada jadwalkii la dejiyay, ee ah in 1-da December la doorto Senator-ka ugu horeeya Aqalka Sare.
0 Comments Topics: cabdi xaashi doorashadda 2020 farmaajo mucaarad